Santa Abataghị Obodo: Ọ nọla ebe a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Santa Anaghị abịa n'obodo: Ọ nọla ebe a
kpakpando mkpuchi dijitalụ nke Disemba nke View VIBE bụ Sarah Nicole Landry, aka @thebirdspapaya na Instagram. Ọ bụ atụmatụ nke ọnwa a ma bụrụ ekele maka ezigbo Santa Claus: nne na nna.
Sarah Nicole Landry bụ onye okike dijitalụ ogologo oge na Instagram, pọdkastị ya, yana nne nke ụmụ anọ, gbara alụkwaghịm, nwunye, na nwanyị nwere obi ike. Ọ tolitela obodo ya n'ịntanetị ka ọ gụnye ụmụ nwanyị nwere otu echiche na-ekerịta mkparịta ụka bara uru.
Landry nwere mmasị na ọdịdị dị egwu na anwansi nke oge ezumike. N'ịbụ ndị mbinye aka ya na ekeresimesi pink gbara ya gburugburu, Landry na-eweta ọrụ nke Santa Clause nke oge a na ndụ, dịka ọ na-eme kwa afọ maka ụmụ ya.
“[Ndị nne na nna] na-eme ọtụtụ ihe karịa ka m ghọtara. Mgbe ị bụ nwata, ị naghị eche echiche banyere otú e si kechie onyinye ndị ahụ ma ọ bụ otú nri si eme ya na tebụl. Dị ka onye okenye, ị maara nke ọma", Sarah Nicole Landry kwuru mgbe ya na ụmụ ya na-ekwu maka ezumike.
Otu a nwere obi ike, mama m extraordinaire na-ekwu maka ịkwalite obodo ya ka ọ bụrụ ebe a na-ekerịta ahụmịhe maka ndị chọrọ nkwado ahụ, gụnyere onwe ya. Maka Landry, ihunanya onwe ya karịrị naanị inwe obi ike, ọ bụ maka igosipụta onwe gị kwa ụbọchị.
"Mgbe mbụ anyị malitere ịtụgharị uche banyere mmadụ maka mkpuchi ezumike anyị, amaara m na anyị kwesịrị ime ihe dị iche," ka Steven Branco, STAMINA Group Inc. onye nduzi ihe okike na onye nchoputa na-ekwu. "Ọ bụghị gị overdoed ezumike odide… Ma mgbe ịhụ Sarah Nicole Landry si mkpọsa na Bodacious wine, ọ bịara m. Anyị kwesịrị ịsọpụrụ ezigbo St Nicks si n'ebe ahụ (Nne / Nne na Nna), site n'ịnọ ọdụ na Instagram sensashion, ike ike, ahu obi ike, Mama extraordinaire…aka @thebirdspapaya, ikwu okwu niile banyere anwansi, na nrụgide, nke ịbụ. nne na nna n'oge ezumike. Oge agbanweela, otú ahụ ka akụkọ ahụ dịkwa, anyị nwekwara obi ụtọ na anyị na-amụnye ìhè na ya, n'ihu na n'etiti, ebe Sera nọ n'isi. "